काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को छ महिनामा १०५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
महाशाखाको तथ्याङ्कअनुुसार सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट ५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै पैदलयात्रु ३५, ट्रक, साइकल, बस, ट्र्याक्टर र कार दुर्घटनामा क्रमशः चार, तीन, दुई, एक र एकजनाले ज्यान गुमाएका हुन् । उपत्यकामा आव २०६९÷७० मा १४८, आव २०७०÷७१ मा १४३, आव २०७१÷७२ मा १३३, आव २०७२÷७३ मा १६६ र आव २०७३÷७४ मा १८२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल साँघुरो बाटो र सवारी साधनको अत्यधिक चापका कारण उपत्यकामा दुर्घटना वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । “दुर्घटनामा कमी ल्याउन चालक स्वयं नै चनाखो हुनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । महाशाखाका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश पुरुष रहेका छन् । यो आवको छ महिनामा ८१ पुरुष र २४ महिलाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश १७ देखि ३५ वर्षसम्मका छन् । जसमा १७ देखि ३५ वर्षसम्मका ५६, १७ वर्ष मुनिका सात र ३६ वर्षभन्दा माथिका ४२ जनाले ज्यान गुमाएको महाशाखाले जनाएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका सहकार्यको खाँचो
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । महाशाखाले गत माघ १७ देखि १९ सम्म चितवनको टाँडीमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिएको हो ।
कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि व्यवसायीको ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । ट्राफिक र व्यवसायीको उद्देश्य राष्ट्र निर्माणका लागि भएकाले एकापसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले नेपालको ट्राफिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीको साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि महासंघले ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन १५, २०७४१३:१४
काठको मुद्धा मिलाईदिन्छु भन्दै घुस माग गर्ने वन अधिकृत रंगेहात पक्राउ !
घाम लागेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुल्यो ! सहजै उडान र अवतरण हुने !
विमान दुर्घटनामा परि पर्यटक सहित १२ जनाको मृत्यु
विप्लवको अनिश्चितकालिन बन्दले जनजीवन प्रभावित !